Ogaden News Agency (ONA) – Bixitaankii Cabdi iley oo siyaabo kala duwan loo fasirayo iyo dhabta waxay tahay – Noora Afgaab
Bixitaankii Cabdi iley oo siyaabo kala duwan loo fasirayo iyo dhabta waxay tahay – Noora Afgaab
Posted by ONA Admin	/ January 17, 2014
Xog badan markaan soo ururinay oo ku saabsan bixitaankii lama filaanka ahaa ee cabdi Iley uu ugu ambabaxay London, waxaa noo soo baxday in siyaab kala duwan loo arko arintaa. Markaan sii baadhnay waxaan isugu gaynay argatiyaha kala duwan oon ku soo ururinay laba qaybood.
1- Xogta ugu badan een ka helayno ilo ka agdhowaa xafiiska iyo inta ku xeeran Cabdi iley waxay xaqiijinayaan in arintan ay ahayd mid aanu ku talagalsanayn Cabdi iley oo qorshahiisa ahayd, umana malaynayno ayay leeyhiin inuu Cabdi ilay ka qarin lahaa bixintaankiisa kooxdiisa. Hadday sidaa dhacdo oo Cabdi iley uu ka qariyayna waxay muujinaysaa ayay leeyhiin inuusan jirin qof uusan ka shakisanayn Cabdi Iley. Waxaa intaa dheer ayay yidhaadeen oo xaqiijinaysa inuusan Cabdi Iley socdaalkan qorshaynin sidii dagdaga ahaydee uu uga ambabaxay Jigjiga taasoo u muuqata inuu ahaa socdaal rabitaan iyo qorhe la’aantiisa ku yimid. Qaarkood ayaa waxay dhahayaan waxaa dhici karta inuu Cabdi Iley ogsoonaa laakiinse uu ka qariyay cid kasta si jaaliyadaha taageersan ONLF aanay dacwada ku socota u dhaqaajin intuuna soo galin London. Arintan uma badinayaan inay sabab u tahay qarinta socdaalkiisa, sidaa daraadeed kooxdan wuxuu ra’yigooda yahay Cabdi iley waa la kexeeyay waxaana kaxaystay wafdiga, ujeeda kasta haka lahaadeene.
2- Anagoo ka duulayna ra’yiga kooxdaa ayaan u xuuraan tagnay dad arimahan hoos ahaan ula socda oo jooga Adisababa kana tirsan mucaaradka Itobiya. Waxay noo sheegeen dadkaan la xidhiidhnay inay jirto arima dhowr ah oo la’isla dhex marayo Adisababa oo ku saabsan wafdigaa iyo Cabdi iley. Dadkan oo qaarkood ay xogta ka heleen shaqaalaha Wasaarada Arimaha Dibada ayaa sheegay in wafdigan arimaha ugu badan ee la doonayo inuu soo xaliyo ay tahay dacwadda ka socota Sweden iyo filimka laga sameeyay dalka Sweden iyo buuga ay qoreen labadii wariye ee dalka Sweden u dhashay. Arimahaa ayay dawladda Itobiya aad u dhibsatay waxayna u aragtaa inay tahay markii ugu horeysay oo urur mucaarad ku ah Itobiya uu gaadhsiiyay dhaawac haybadii Itobiya ay ku lahayd dibadaha. Sidaa daraadeed ayay Itobiya u dirtay wafdigan, Cabdi iley-na waxaa loo sii kaxeeyay maadaama uu yahay shaqsiga eedeysnaha (Culprit) ah in laga maqlo afkiisa jawaabaha uu ka bixinayo su’aalaha ay doonayso maxkamadda Sweden. Waxay diblomaasiyada Itobiya doonaysaa inay muujiso inuusan jirin wax ay qarinayso ama diidan tahay in la ogaado, oo haddii dambiga loo haysto uu yahay mid dhacayna aanay dawladda Itobiya shaqa ku lahayn ee qofkii gaystay uu masuul ka yahay. Itobiya waxay u aragtaa in suuradeeda (Image) ay ku soo celin karto oo kali ah inay ka dhigto dambiyada ay galayaan madaxda Kilidada mid iyaga un ku kooban oo dawladda dhexe aanay ku raacsanayn. Ugu dambaynta bay ydihaahdeen waa inuu Cabdi Iley iska difaacaa dambiga loo haysto, oo waliba cadeeyaa dawladda dhexe ee Itobiya in aanay ogsoonayn shaqana ku lahayn waxa ka dhacaya gudaha Ogadenya.
Wixii soo kordha waan la socon doonaa.
Noora Afgaab/Jigjiga iyo Adisababa